Bit By Bit - नीतिशास्त्र - 6.6.1 अवगत सहमति
सबैभन्दा अनुसन्धान लागि सहमति केही फारम: अनुसन्धानकर्ताहरूले, र नियम पालन गर्न सक्छौं गर्नुपर्छ गर्छन्।
सूचित सहमति एक आधारभूत विचार हो - केहि नजिकै जुनून (Emanuel, Wendler, and Grady 2000; Manson and O'Neill 2007) - अनुसन्धान अनुसन्धान नैतिक। अनुसन्धान नैतिकताका सरल संस्करणले यसो भन्छ: "सबै कुराको लागि आकस्मिक सहमति।" यो सरल नियम, तथापि, अवस्थित नैतिक सिद्धान्तहरू, नैतिक नियमन, वा अनुसन्धान अभ्यासको साथ संगत छैन। यसको सट्टा, शोधकर्ताहरू, एकै र जटिल नियम पछ्याउन सक्छन्, गर्न सक्छन्: "धेरै अनुसन्धानका लागि केही रूपको सहमति।"
पहिलो, सूचित सहमतिको बारेमा अधिक सरल विचारहरू बाहिर जाने क्रममा, म तपाईंलाई भेदभाव अध्ययन गर्न क्षेत्र प्रयोगहरूको बारेमा बढी बताउन चाहन्छु। यी अध्ययनहरूमा, फरक विशेषताहरू जुन नक्कली आवेदकहरू - केही पुरुष र केही स्त्रीहरू भन्नुहोस् - विभिन्न कार्यका लागि आवेदन। यदि एक प्रकारका आवेदकले प्रायः भर्ती गरिन्छ भने शोधकर्ताहरूले निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् कि भर्ती प्रक्रियामा भेदभाव हुन सक्छ। यस अध्यायको उद्देश्यका लागि, यी प्रयोगहरूको बारेमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि यी प्रयोगका सहभागीहरू - नियोक्ताहरूले कहिल्यै सहमति प्रदान गर्दैनन्। वास्तवमा, यी सहभागीहरू सक्रिय रूपमा छलिएका छन्। यद्यपि, 17 देशहरुमा कम से कम 117 अध्ययनहरु (Riach and Rich 2002; Rich 2014) भेदभाव अध्ययन गर्न क्षेत्र प्रयोगहरू गरेको छ।
भेदभावको अध्ययन गर्न क्षेत्र प्रयोगहरू प्रयोग गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले यी अध्ययनहरूको चारवटा विशेषताहरू पहिचान गरेका छन् जसले सामूहिक रूपमा तिनीहरूलाई नैतिक रूपमा अनुमति दिन्छ: (1) नियोक्ताहरूलाई सीमित हानि; (2) भेदभावको विश्वसनीय उपाय भएको ठूलो सामाजिक लाभ; (3) भेदभाव को माप को अन्य तरिकाहरु को कमजोरी; र (4) तथ्य यो छलले दृढताले त्यो सेटिङ (Riach and Rich 2004) को मानदण्डको उल्लङ्घन गर्दैन। यी प्रत्येक परिस्थितिहरू महत्वपूर्ण छ, र यदि तिनीहरू मध्ये कुनै पनि सन्तुष्ट छैनन् भने, नैतिक मामला अधिक चुनौतीपूर्ण हुनेछ। यी तीन सुविधाहरू Belmont रिपोर्टमा नैतिक सिद्धान्तहरूबाट व्युत्पन्न गर्न सकिन्छ: सीमित हानि (व्यक्ति र भक्तिको लागि आदर) र अन्य तरिका (भित्ता र न्याय) को ठूलो लाभ र कमजोरी। अन्तिम फीचर, प्रासंगिक मानदण्डों को नवाचार, मेनोलो रिपोर्ट को सम्मान को लागी कानून र सार्वजनिक रूचबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। अन्य शब्दहरूमा, रोजगारीका अनुप्रयोगहरू एक सेटिङ हो जहाँ सम्भावित छलको केहि अपेक्षा पहिले नै छ। यसरी, यी प्रयोगहरूले पहिलेदेखि नै प्राचीन नैतिक परिदृश्यलाई प्रदूषण गर्दैन।
यस सिद्धान्तमा आधारित तर्कको साथ, आईआरबीहरूको दर्जनौं निष्कर्ष निकालेको छ कि यी अध्ययनहरूमा सहमतिको कमीले हालको नियम, विशेष नियम नियम §46.116, भाग (डी) मा समेटिएको छ। अन्ततः, अमेरिकी अदालतले भेदभाव (संख्या 81-3029 संयुक्त राज्य अदालत अपील, सातवें सर्किट) को मापने को लागि क्षेत्र प्रयोगहरुमा सहमति को उपयोग र धोखा को उपयोग को समर्थन पनि गरेको छ। यस प्रकार, बिना सहमति को क्षेत्र प्रयोग को उपयोग मौजूदा नैतिक सिद्धान्तहरु र मौजूदा नियमहरु (कम से कम संयुक्त राज्य मा नियमहरु) संग संगत छ। यो तर्क व्यापक सोशल रिसर्च समुदाय, आईआरबी दर्जनौं र अपील को अमेरिकी न्यायालय द्वारा समर्थित गरिएको छ। यसकारण, हामीले सरल नियम "सबै कुराको लागि जानकारी बुझ्न अस्वीकार गर्नुपर्दछ।" यो एक नियम होइन कि शोधकर्ताहरूले पछ्याउँछन्, न त यो हो कि तिनीहरूले पछ्याउनुपर्छ।
"सबै चीजको लागि सूचित सहमति" बाट बाहिर जान्छ एक कठिन प्रश्नका साथ पाना शोधकर्ताहरू: कुन प्रकारको अनुसन्धानको लागि कुन प्रकारका सहमति आवश्यक छ? स्वाभाविक रूपले, यस प्रश्नको वरिपरि पर्याप्त बहस भएको छ, यद्यपि यसको अधिकांश एनालॉग युगमा मेडिकल रिसर्चको सन्दर्भमा छ। त्यस छलफलमा संक्षेप गर्दै, नेत्र अयल (2012) लेख्छन्:
"अधिक जोखिमपूर्ण भएको हस्तक्षेप, अधिक यो एक उच्च-प्रभाव वा निश्चित 'महत्वपूर्ण जीवन विकल्प', अधिक यो मूल्य-लादेन र विवादास्पद, को हस्तक्षेप सीधा, अधिक प्रभावित कि शरीर को क्षेत्र थप निजी छ द्वान्द्वमा र चिकित्सक, मजबूत अवगत सहमति लागि उच्च आवश्यकता unsupervised। अन्य अवसरमा धेरै मजबूत आवश्यकतालाई सहमति जानकारी, र साँच्चै, कुनै पनि फारम को सहमति को लागि, कम छ। ती अवसरमा लागत उच्च सजिलै आवश्यकता अधिरोहण गर्न सक्छ। "[आन्तरिक दृष्टान्त बहिष्कृत]
यस बहसबाट एक महत्त्वपूर्ण अन्तरदृष्टि यो हो कि सूचित सहमति सबै वा केहि होइन: बलियो र कमजोर प्रकारका सहमतिहरू छन्। केही परिस्थितिहरूमा, बलियो सूचित सहमति आवश्यक देखिन्छ, तर अरूमा, कमजोर रूपहरू सहमति उपयुक्त हुन सक्छ। अर्को, म तीन कारणहरू वर्णन गर्नेछु कि शोधकर्ताहरूलाई सूचित सहमति प्राप्त गर्न संघर्ष हुन सक्छ, र म यी अवस्थामा केही विकल्पहरू वर्णन गर्नेछु।
पहिलो, कहिलेकाहीँ सहभागीहरू लाई सूचित सहमति प्रदान गर्न सोध्दा खतरा बढ्न सक्छ। उदाहरणका लागि, दोहोरोमा, इन्टरनेसनल सेन्सेसरको मापदण्डको लागि प्रयोग गरिने कम्प्यूटरको लागि प्रत्याशित प्रदान गर्न दमनकारी सरकारहरू अन्तर्गत बाँच्ने व्यक्तिहरूलाई सोध्न सकिन्छ जुन ती जोखिममा सहमत हुन्छ। जब सहमति बढेको खतरा बढ्छ, शोधकर्ताहरू उनीहरूले के गर्दैछन् भन्ने बारेमा जानकारी सुनिश्चित गर्न सक्छन् र यो प्रतिभागिहरु को लागी अप्ट आउट गर्न सम्भव छ। साथै, उनीहरूलाई सहभागीहरू (उदाहरणका लागि, गैर सरकारी संस्थाहरू) प्रतिनिधित्व गर्ने समूहहरूबाट सहमति खोज्न सक्थे।
दोस्रो, अध्ययनको सुरुवात अघि नै अध्ययनको वैज्ञानिक मान सम्झौता गर्न सक्नु पहिले कहिलेकाहीँ पूर्णतया सूचित सहमति हो। उदाहरणका लागि, भावनात्मक कन्टेगरीमा, यदि सहभागीहरूले थाहा पाए कि शोधकर्ताहरूले भावनाहरूको बारेमा प्रयोग गरिरहेका थिए, यसले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरेको हुनसक्छ। सहभागीहरूबाट सहकर्मी जानकारी, र उनीहरूलाई धोका दिने, सामाजिक अनुसन्धानमा असामान्य छैन, विशेष गरी मनोविज्ञानमा ल्याब प्रयोगहरूमा। यदि अध्ययन शुरुवात अघि सूचित सहमति सम्भव छैन, शोधकर्ताहरूले अध्ययन गर्न सकिसकेपछि (र सामान्यतया) डिबर्ट सहभागिता गर्न सक्थे। सामान्यतया डिब्रीबिंगले वास्तवमा के हो भनेर व्याख्या गर्दछ, कुनै पनि हानिकारक उपाय, र तथ्य पछि सहमति प्राप्त गर्न। त्यहाँ कुनै बहस छ, तथापि, के बारे मा कि क्षेत्र प्रयोगहरुमा debriefing उपयुक्त छ, यदि debriefing आफु प्रतिभागी (Finn and Jakobsson 2007) हुन सक्छ।
तेस्रो, कहिलेकाहीँ यो तपाईंको अध्ययनबाट प्रभावित सबैबाट सूचित सहमति प्राप्त गर्न तार्किक रूपमा अव्यवस्थित छ। उदाहरणका लागि, एक शोधकर्तालाई कल्पना गर्नुहोस् जुन बिटकोइन ब्लकचेन अध्ययन गर्न चाहानुहुन्छ (बिटकोइज एक क्रिप्टो-मुद्रा हो र ब्लकचेन बिटकोइन ट्राफिकेसन (Narayanan et al. 2016) सार्वजनिक रेकर्ड हो। दुर्भाग्यवश, Bitcoin प्रयोग गर्ने सबैबाट सहमति प्राप्त गर्न असम्भव छ किनभने यी व्यक्तिहरू गुमनाम छन्। यस अवस्थामा, शोधकर्ताले Bitcoin प्रयोगकर्ताहरूको नमूनालाई सम्पर्क गर्न र उनीहरूको सूचित सहमतिको माग गर्न प्रयास गर्न सक्थे।
यी तीन कारणहरू किन अनुसन्धानकर्ताहरूले सूचित सहमति बढ्ने जोखिम प्राप्त गर्न सक्छन्, अनुसन्धान लक्ष्य र सम्झौताका सीमाहरू सम्झौता गर्न सक्षम नहुन सक्छन् - अनुसन्धानकर्ताहरूले सूचित सहमति प्राप्त गर्नका लागि मात्र कारण होइनन्। अनि मैले सुझाव दिएको छु - मैले अनुसन्धानको बारेमा जनतालाई जानकारी दिएँ, अप्ट आउट गर्न, तेस्रो पक्षबाट सहमति खोज्ने, डिब्रीकिङ, र सहभागीहरूको नमूनाबाट सहमति खोज-सबै मामलाहरूमा सम्भव नहुन सक्छ। यसबाहेक, यी विकल्पहरू सम्भव भए तापनि तिनीहरू दिइएको अध्ययनको लागि पर्याप्त नहुन सक्छ। यी उदाहरणहरू के देखाउँछन्, तथापि, कि सूचित सहमति सबै वा केही होइन, र त्यस रचनात्मक समाधानले अध्ययनका नैतिक सन्तुलनलाई सुधार गर्न सक्छ जुन सबै प्रभावित पक्षहरूको पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्दैन।
"सबै कुराको लागि सूचना बुझ्न" को सट्टामा, अन्वेषणकर्ताले, थप जटिल जटिलता पछ्याउन सक्छन्: "धेरै चीजहरूको लागि केही सहमति।" सिद्धान्तको सन्दर्भमा विस्तारित, सूचित सहमति आवश्यक छैन न त पर्याप्त व्यक्तिहरूको आदरको सिद्धान्त (Humphreys 2015, 102) । यसबाहेक, व्यक्तिहरूका लागि आदर केवल सिद्धान्तहरूमध्ये एक हो जसले अनुसन्धान नैतिकताबारे विचार गर्दा सन्तुलित हुनु आवश्यक छ; यो स्वचालित रूपमा भ्रामक, न्याय, र कानून र सार्वजनिक रुचिको लागि सम्मान नगर्ने, एक बिन्दुले पछिल्लो 40 वर्ष (Gillon 2015, 112–13) नैतिकवाद द्वारा बारम्बार बनाइयो। नैतिक ढाँचाको सन्दर्भमा विस्तारित, सबै कुराको लागि सूचित सहमति प्रायः नैदानिक ​​स्थिति हो जुन समय बमको रूपमा शिकार हुन्छ (खण्ड 6.5 हेर्नुहोस्)।
अन्तमा, एक व्यावहारिक कुरा, तपाईँ सहमति कुनै पनि प्रकारको बिना अनुसन्धान विचार गर्दै छन्, त्यसपछि के तपाईं एक खैरो क्षेत्र हो भनेर थाहा हुनुपर्छ। होस् गर। अनुसन्धानकर्ताहरूले सहमति बिना भेदभाव को प्रयोगात्मक अध्ययन सञ्चालन गर्न गरेका छन् कि नैतिक तर्क मा फिर्ता हेर। आफ्नो औचित्य रूपमा बलियो छ? किनभने अवगत सहमति धेरै Lay नैतिक सिद्धान्त गर्न केन्द्रीय छ, तपाईंले संभावना आफ्नो निर्णय रक्षा गर्न मा भनिन्छ हुनेछ भन्ने थाह हुनुपर्छ।